What if my child is in contact with someone with COVID-19: Yintoni endingayenza ukuba umntwana wam udibene nomntu one- COVID-19? – Messages for Mothers
What if my child is in contact with someone with COVID-19: Yintoni endingayenza ukuba umntwana wam udibene nomntu one- COVID-19?
Kuxhomekeka ukuba babe “kufutshane kakhulu” okanye hayi, “Ukuba kufutshane kakhulu” ngumntu obengaphantsi kwemitha kufutshane nomntwna wakho ixesha elingaphezu kwemizuzu eli-15 yaye ukuba mhlawumbi omnye wabo okanye bobabini bebenganxibanga sifonyo.
Ukudibana nomnye ekhaya: kuya kuba kukudibana yayeumntwana wakho kufuneka ahlale ekhaya iintsuku ezili 14, nokuba baphilile yaye ababonakalisi naziphi na iimpawu ze-COVID-19.
Ukudibana ekhaya: Ukuba umntu (utitshala okanye omnye umfundi) ngumntu okufutshanwe, umnntwana wakho makahlale ekhaya naye iintsuku ezili 14.
Ukuba akadibananga naye, akukho mfuneko yokuhlala ekhaya.
← How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Kungenziwa ntoni ukunqanda umntwana wam ukuba asasaze i-covid 19 ekhaya? → How can I protect my child when they go out for exercise or to school: Ndingabakhusela njani abantwana bam xa bephumela ngaphandle ukuya kuzilolonga okanye esikolweni?